Wako Brand sePlanet - Mushandi Wemagariro | Martech Zone
Yako Brand sePlanet - Mushandi Wemagariro
Chipiri, Mbudzi 5, 2013 Muvhuro, Mbudzi 4, 2013 Douglas Karr
Isu takafara patakaona Wese Munhu Zvemagariro uye kugona kushandisa vako vashandi kuti vabatsire kuwedzera izwi rekambani yako asi isu tichiri kushamisika nekunyarara kwakaita makambani mazhinji. Isu tinoziva kuti vamwe vashandi havana kubatana, asi patinoona vaviri vadzokororazve vachiuya kubva kukambani ine mazana evashandi, tinotanga kushamisika kuti chii chimwe chingave chakashata.
In Mushandi Wezvemagariro: Makambani Makuru Akaita Sei Midhiya Yemashoko Kushanda, Bhuruu Focus Kushambadzira inoenda kuseri kwezviitiko nemhando dzinoverengeka dzinotungamira - senge IBM, AT&T, Dell, Adobe, Southwest Airlines, Cisco, Acxiom, uye Domo - kudhonza chivharo kubva kunokurudzira nyaya dzezvemabhizimusi ezvekudyidzana dzakasimudzira makambani aya muzana ramakore rechi21. Aya maratidziro ekucheka-cheka vese vauya kuzadzikiso imwechete: iyo nzira yekubhizinesi rezvemagariro iri nekupa simba kumushandi wezvemagariro.
Enda utarise Mushandi Wemagariro kumhara peji uye tora chitsauko chemuenzaniso!
Tags: yeblue kutarisa kushambadziramushandi wemagarirobhuku remushandi wemagariromushandi wezvemagariro
Chakavanzika Zvombo zvekushambadzira Zvirinani uye Kutengesa